Archive du 20180419
Pr Raymond Ranjeva “Aoka izay ny rà latsaka”
Ny rako... ho fanavotana ny tanindrazako, hoy Ramose Lucien Botovasoan, ao amin’ny boky iray nosoratan’i R.P. Louis Deguise.
Fampandaniana ny lalàm-pifidianana Mivoaka hatrany ny porofon’ny hevi-petsy
Sarotra ny hino fa tsy niniana ho atao mihitsy izay handaniana lalàm-pifidianana kitoatoa tamin’ity indray maka ity raha mihaino ireo fanehoan-kevitra marolafin’ny mpitondra sy mpanara-dia ny antoko Hery vaovaon’i Madagasikara.
Raharaha kolikolin’ny depiote Raikitra ny fampihantsoan’ny Bianco
Raharaha nitana ny sain’ny maro ny resaka kolikoly momba ny fampandaniana ny lalàm-pifidianana teny amin’ny amin’ny antenimieram-pirenena, saingy nangingina tato ho ato. Nalaza ny fisian’ny kolikoly ary nanitrikitrika izany ireo depiote miisa 73 ahitana ny TIM, MAPAR,
Fehin-kevitra ny K3F tany Fianarantsoa Apetraho ny fahamarinana hiadanan’ny vahoaka
Miombon-kevitra ary namaly ireo fanambarana sy antso nataon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara sy ny FFKM tamin’ny taona 2017 mahakasika ny fiainam-pirenena izay mikorosy fahana amin’ny lafiny maro:
Raharaha « Iles Eparses » Mangina tanteraka ilay Vaomiera Malagasy-Frantsay
Tsy heno intsony ny tohin’ny asan’ilay voamiera iombonan’ny Malagasy sy ny Frantsay momba ny « Iles Eparses » na ireo nosikely Malagasy mbola hifandroritana amin’i Lafrantsa.
Marc Ravalomanana “Tsy misy fanajana zon’olombelona eto”
Tratry ny gafy sy ny antsojay indray i Marc Ravalomanana omaly, raha izy avy any Fianarantsoa niatrika ny atrikasa nasionaly “fanavotam-pirenena tena izy” nokarakarain’ny K3F (Komitin’ny Fihavanana Fandriampahalemana Fiadanana) ka nihazo an’Ambalavao.
Filohan’ny Filan-kevitra Monisipalin’ny CUA “Manohana 100% ny hetsiky ny depiote izahay”
Legende: Ny Filohan’ny Filankevitry ny Tanànan’Antananarivo Andriambahoaka Faustin nandritra ny fanambarana nataony omaly
Vokatry ny famoizam-po Tovolahy 23 taona maty nananton-tena
Tovolahy iray 23 taona no hita faty nihantona tamin'ny tady teo amin'ny “cerceau” an’ny kianja filalaovana basikety ao amin’ny Sekoly Ziona Vaovao Mahajanga ny talata 17 aprily tokony ho tamin'ny valo ora alina. Nisy taratasy niraikitra tamin’ny tepan’ny patalohany, izay nisy soratra hoe :
Amboaran`ny CAF Nandresy fa tsy tafita ny Fosa Juniors
Na dia nandavo ny Aduana Stars avy any Ghana tamin`ny isa 2 noho 1 aza ny Fosa Juniors tany amin’ny Kianja Rabemananjara Mahajanga omaly, nandritra ny fihaonana miverina teo amin`ny lalao 1/16n-dalana,
Basket-Ball Hafana ny fihaonan’ny All-Stars Gasy sy ny Csa Rosiana
Handrasana fatratra ankehitriny ny lalaom-piralahiana eo amin’ny taranja basikety hifanandrianan’ny All-Star du Président Malagasy sy ny ekipa miaramila Rosiana ny Csa St-Petersbourg izay ho tontosaina rahampitso zoma 20 aprily tolakandro ao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina.
Ny tody « itsy » misy ka ny atao no miverina fa tsy hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina no fiteny, hoy ireo mpandalina sy mpikaroka momba ny Malagasy rehefa manitsy ny hevi-baventin’ny fahendren’ny Ntaolo mikasika ny fiheverana ny atao hoe tody .
Antsahamamy Ankatso Nahazo toeram-pitsaboana vaovao
Efa ela no niandrandra ny mba hanana tobim-pitsaboana mahaleo tena ho azy ireo mponina eny Antsahamamy Ankatso, Boriborintany faharoa. Voatery mamonjy any amin’ny toeran-kafa hatrany mantsy izy ireo rehefa manana olana,
Aretina tazomoka Namono olona 4 sahady
Mbola mahazo vahana eto amintsika ihany ankehitriny ny aretina tazomoka na dia efa betsaka aza ireo vahaolana atolotry ny fitondram-panjakana ho fitandroana ny fahasalamam-bahoaka. Mbola nahatratra efatra indray mantsy ireo namoy ny ainy manerana ny Nosy ny volana Janoary sy Febroary lasa teo ka ny roa tamin’ireo dia tany amin’ny distrikan’Ihosy,
Mpankafy « Jazz Malagasy » Miha tanora hatrany
Ny faha 30 ny volana aprily izao moa no andro iraisam-pirenena ho an’ny fomba filalao mozika Jazz na ny « Jazz day », ary toy ny isan-taona dia isan’ny mandray anjara amin’izy io koa isika eto Madagasikara. Miha tanora hatrany ireo mpakafy, hoy ireo mpilalao.
Fibaikoana ny zandarimaria Miditra amina kihon-dàlana vaovao
Miditra amin’ny kihon-dàlana lehibe ny zandarimariam-pirenena amin’izao fotoana izao noho ny fanovana isan-tsokajiny eo amin’ny fibaikoana sy ny fitanana, izay hikendrena ny soa sy ny tsaratsara kokoa hatrany.
Mpiantok’omby tao faratsiho Maty voatifitra teo amin’ny lohany
Maty voatifitry ny dahalo indray ny mpiantoka omby iray avy any amin’ny Distrikan’Antanifotsy. Tao amin’ny kaominina Vinaninony atsimon’i Faratsiho ny alatsinainy teo.
Raharaha entona simika Mitombo ny ahiahy momba an’i Syrie
Nilaza ny mpitondra teny eo anivon`ny departemanta Amerikanina fa manana antotam-baovao milaza fa ``Chlore`` sy etona no nampiasaina tao Douma Syrie.
4 taona izao ny fifindra-monina any Soaniedanana Hitarin’ny Hafari any an-toeran-kafa
Feno efa-taona amin’ity taona 2018 ity sahady ilay tetikasa fifindra-monina karakarain’ny fikambanana HAFARI Malagsy eny amin’ny PK 67 Soaniedanana, làlam-pirenena fahaefatra. Fahombiazana tanteraka no azo tamin’izany,
Famatarana ny toetry ny andro Ain-dehiben’ny fampandrosoana
Ny toekarena dia miainga amin`ny harena voajanahary ao amina firenena iray izay ho entina hanaingana ny toekareny, ka anisan`izany ny toetr`andro sy ny toe-tany. Rehefa miresaka izany toetr`andro izany dia mitodika any amin`ny famatarana ny toetry ny andro ny saina, ary mibahana hatrany ny hoe maminavina ny maripana kanefa anisan`ny sehatra iray tsy azo ihodivirana amin`ny fampandrosoana izany.